Sei kwazvo romusoro?
Utano, Zvirwere uye Conditions
Unoziva kunzwa kana ihosha romusoro, asi chikonzero pachena kuti handizvo? Zvinoita sokuti vakawanda, varume navakadzi vari nematambudziko akafanana. Externally, kufanana, zvose anotarira kukuru: bvudzi zvakanaka, uye imi muri dzinovabatsira, vanoti, vose mitemo, asi dzimwe nguva anoita pacharo akanzwa kurwadziwa romusoro.
Asi ngatitarise murayiro, nei kurwadziwa ganda golovy.Prichiny ichi kunogona zvakasiyana, uye vamwe vavo zvikuru chakakomba.
Unoziva manzwiro chinokurwadza ganda musoro, kana kuti, kana bvudzi midzi?
Izvi zvinonyanya kuoneka kana uri kumhanya ruoko kuburikidza bvudzi, ita vhudzi? Kana zvakadaro, zvichida chikonzero ndechokuti imi kuzviitawo kugadzirwa musoro, Kugadzira, uye ikozvino, kana Combing Hair ake nenzira yakasiyana, bvudzi follicles vanotanga kurwadzisa.
Kana hosha romusoro nokuda kwechikonzero ichi (zvimwe zvikonzero isu ichatsanangura pazasi), ipapo chete mhinduro iri kwiza peganda romusoro. Inogona kuitwa nyanzvi, uye pasina pamberi zvimwe unyanzvi.
Massage kunonatsiridza kweropa, saka marwadzo pakarepo taramuka kupinda necheseri, uye mushure kurapa shoma ichanyangarika zvachose. Very zvakanaka chokubatanidza romusoro masaja uye musiyano yokugezera. Zvinobatsira kuti muviri wose, asi kunyanya nokuda musoro. Douches kunonatsiridza kuparadzirwa, uye naizvozvo kurwadziwa, zvakare, kwete.
Kuti kudyisa Mabumba mavhitaminzi uye kuvaita zvikuru kuchinja, Zvinokurudzirwa chokuzora Mask. Kana hosha romusoro, ipapo swatanudza ose zviyero comprehensively.
Zvakanaka zvinobatsira kuderedza kunetseka kunge zai mondo uye maranjisi muto akadai ndimu. Siyai chifukidzo ichi kwemaminitsi 10-15 uye ipapo sukurudza nemvura. Vamwe vanhu vanoda masiki kuwedzera samadonhwe uchi shoma.
Imwe nzira yavangabata marwadzo, zviri zvokudya chifukidzo. Zvakanakisisa kusarudza rye chingwa, unogona kushandisa doro pasina preservatives. Kufukidza musoro nejira kwemaminitsi mashoma, ipapo sukurudza bvudzi.
Asi zvinoitika kuti kunokuvadza ganda romusoro mumwe chikonzero. Naizvozvo, pane zvakaoma Masiki kunogona kubatsira. Zvichida dzaparadzwa midziyo ropa pasi ganda uye anoita kuti marwadzo kurwadziwa, dzimwe nguva zvikuru refu uye unopinza. Muchiitiko chino, unofanira kuva misoro kuongororwa trichologist uye chiremba wetsinga. Unogona mishonga nzira yokurapa: majekiseni, masaja, mavhitaminzi. Nani kwete kumhanya uye regai kushivirira marwadzo uye kunobvunza chiremba wako pakarepo.
Dzimwe nguva hosha romusoro kubva zvauri Somuenzaniso, kuti vakabatisisa kugadzirwa musoro. Somuenzaniso, muswe, chiri nevakawanda zvakadaro mazuva ano. Too kudhonza ganda romusoro asingagoni, zviri zvakaipa nokuda Mabumba. Uyezve, vanotambura marwadzo uye cutaneous lyubitel'nitsy kemisitiri staining uye kakawanda, kunyanya kushandiswa rehydrogen peroxide. Vamwe kwemakemikari madhayi anogona kupisa pamusoro rukoko ganda, mune zviitiko zvakadaro uchawana kuti ganda riri reddened, pane kuvaviwa uye kunyange marwadzo.
Chimwe chinokonzera marwadzo munzvimbo peganda romusoro chinhu chakuvhe. Hazvina kuitika kazhinji, asi chirwere akawanikwa. Zvichida nhonga mashoko chakuvhe paaishandisa mizinga kana heti vamwe vanhu. Naizvozvo, vanochengeta mirayiro utsanana uye regai kushandisa vamwe vanhu zvinhu.
Dzimwe mhosva marwadzo anogona kuva psoriasis. Psoriasis kunokanganisa ganda rose, yose kana kuti nzvimbo. Uye zvingaita zvakanaka kugara uye pasi vhudzi. Uyezve, zvinova pachena kwete nokuda vhudzi. Asi zvino bvudzi anotanga dzakaonda uye pamhazha mavara kuoneka.
Nyatsoteerera yedzinza. Dzimwe nguva zvinoitika kuti simba bvudzi follicles, dzakaonda anenge ganda kunotsanangurwa nhaka unhu, asi izvozvo hazvirevi kuti kurapa maturo. Unofanira varikwizire mafuta pamusoro firming ganda uye bvudzi.
Romusoro hakudi zvishoma kutarisirwa pane chako ganda.
Vasculitis vomwana: Hemorrhagic, sema. Zvinokonzera, zviratidzo, nemifananidzo, kurapwa, fungidziro
Zvinokonzera, zviratidzo uye Mabatirwo zoster
Vakatsauka septum: zvikonzero nemigumisiro
Sei nzwa dzungu, kurukutika uye dzimwe matambudziko
The causative nomumiririri vakarara nokurwara. Zviratidzo uye Mabatirwo akarara nokurwara
How kuongorora yemagetsi mita pa oga kumba?
Carrera - magirazi, anozivikanwa pasi rose
Yamaha R1 - nokurondedzerwa uye zvose zvakanakisisa kuti anogona kuva mune zvemitambo mudhudhudhu
Chii kupa baba kwemakore 60: zvipo yepakutanga uye kukwaziswa
Scales uye shumba. zviratidzo kugarisana
Dry mafuta Mahwendefa: nhoroondo uye mazano kushandisa
Kargopol chido - nhoroondo yezvakabva. Kuenzanisa kweKaggol toy
Kudhaka: Zviratidzo uye kurapwa
Cooking bhinzi Salad pamwe chizi
Nut Chingwa kuponesa: zviratidzo, tsika uye kukwaziswa
Kukarukureta Example damping Linear mufashoni. Depreciation
Humor uye zvakanaka American Comedy